Manantena fa tsy manahy tena… | NewsMada
Niavaka, nanetriketrika, be vahiny… Izay ny nanaovan’ny filoha vaovao ny Repoblika fianianana tamin’ity, raha ampitahaina ny tamin’izay natao dimy taona lasa fotsiny, ohatra. Nahoana? Manana fanantenana ny vahoaka, mavitrika, faly… Hafa ihany ny tena safidin’ny tena, na toy inona mety ho fanatsatsoana: latsaky ny 50% ny tahan’ny mpifidy tamin’ny fandatsaham-bato.
Na ahoana na ahoana, tsy takona afenina ny hafanam-pon’ny vahoaka ankapobeny amin’izao fitondrana vaovao izao. Manantena fatratra amin’izay ho fiovana sy fanovana izy fa tsy manahy tena amin’izay mety hitranga hoe: hanao ahoana, ho hita eo, io ve tsy ho toy izao na izatsy… ? Hery lehibe ho an’ny mpitondra vaovao izay, miantoka ny fahamarinan-toerana maharitra.
Na ireo mpitazan-davitra sy tsy matokitoky aza; eny, mety nanahy tena sy nanantena ny mety hisian’ny korontana politika indray aorian’ny fifidianana na efa namboly izany aza: nangina sy tsy nihetsika izao. Efa fanomezan-tanana amin’ny famelana ny mpitondra ho marin-toerana izay, hiasa amim-pilaminana sy an-kalalahana ary amim-paharetana. Arahaba soa, arahaba tsara…
Izany tsy midika hoe tsy hisy ny mpanohitra fa mbola ho avy… Izay tsy mahazo toerana na saro-toerana eo no ho mpanohitra? Ho hita eo… Mba hatao sy hirosoana amim-pilaminana amin’ny fanajan-dalàna sy ny fifanajana izay fa tsy ho bontolo na amboletra intsony. Mba tena hisy dikany sy lanjany izao hafanam-po sy hafalian’ny vahoaka izao hirosoana amin’ny dingana vaovao.
Na izany aza, na toy inona hafanam-po sy fanantenana: tsy misy fahagagana tonga ho azy amin’izao eo amin’ny fiainana. Ny ataon’ny tena ihany no mahasoa na maharatsy. Samy mila miasa sy mandray ny anjara tandrify azy eo amin’ny sehatra misy azy avy: miara-mandroso fa tsy miandry ny hafa fotsiny, na eo aza ny mpitarika. Fiovana sy fanovana eo amin’ny tsirairay koa izay.
Tsy aleo àry ve mandroso, azo antoka fa mandeha sy ho tonga? “Aza matahotra inona amin’izay tsy ampy fandehanana mafy fa matahora izay tsy afa-mandroso intsony”, hoy ny ohabolana sinoa iray izay.